Organosilicon ဖုန်မှုန့်အိတ်ဘောင် China Manufacturer
Organosilicon Dedusting ကေ့အရိုး,Dedusting Bag ကေ့ကိုလေပေါ်မှာပ,ပလပ်စတစ်ဖုန်ကောက်ခံရေး Bag ကေ့
Botou Youjian Environmental Protection Equipment Co. LTD. [Hebei,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: Manufacturer Main Mark: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide ထုတ်ကုန်: 11% - 20% Cert: FAMI-QS, GB, ISO9001, ISO9002 ဖေါ်ပြချက်: Organosilicon Dedusting ကေ့အရိုး,Dedusting Bag ကေ့ကိုလေပေါ်မှာပ,ပလပ်စတစ်ဖုန်ကောက်ခံရေး Bag ကေ့
Home > ထုတ်ကုန်များ > လေ့လာကြရအောင် Dedusting > Organosilicon ဖုန်မှုန့်အိတ်ဘောင်
 Organosilicon ဖုန်မှုန့်အိတ်ဘောင်
လည်းမြေမှုန့်အိတ်လှောင်အိမ်အဖြစ်လူသိများဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးမူဘောင်, အိတ် filter ကိုများအတွက်လိုအပ်သောဆက်စပ်ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးအရိုးစု၏အဓိကအမျိုးအစားများပါဝင်သည်: 1. ပတ်ပတ်လည်အိတ်အမျိုးအစားမြေမှုန့်ဖယ်ရှားရေးမူဘောင် (ပြင် filter ကိုအိတ်) 2. မြို့ပတ်ရထားအိတ်နွေဦးဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးအရိုးစု (ပြင် filter ကိုအမျိုးအစား)3ပြားချပ်ချပ်အိတ် (ပြင် filter ကို) (ဘဲဥပုံ, rhombus),4။ စာအိတ်အမျိုးအစား 5. ပေါင်းစုံအပိုင်းဘောင် (ဘဲဥပုံပေါင်းစုံအပိုင်းဘောင်။ က Round အိတ်အမျိုးအစားပေါင်းစုံအပိုင်းဘောင် (ထည့်သွင်းအမျိုးအစား, disc ကိုအမျိုးအစား)) ဘောင်။ venturi နှင့်အတူ frames ။ ပလပ်စတစ်အိတ်အဘို့အ frames, သံဘောင်များ, သပ်သပ်ရပ်ရပ်စိန်ဘောင်။
တစ်ဦးက, ကိုက်: embedded ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးမူဘောင် SD က: ဒေါင်းလုပ်လှောင်အိမ်အေဒီ: သတ်မှတ်ထားတဲ့လှောင်အိမ်။
ကို C, တစ်ဦးက: 10 အမြစ်အားဖြည့်ခ: 12 အမြစ်အားဖြည့်ကို C: 20 အမြစ်အားဖြည့်: D: 8 အမြစ်အားဖြည့် E ကို: 16 အမြစ်အားဖြည့် F ကို:6အမြစ်အားဖြည့်
လှောင်အိမ်၏: D, အရှည်
F ကို, တစ်ဦးက: Venturi မပါဘဲခ: တစ် venturi ပြွန်ရှိ
ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များစာရင်း: Organosilicon Dedusting ကေ့အရိုး , Dedusting Bag ကေ့ကိုလေပေါ်မှာပ , ပလပ်စတစ်ဖုန်ကောက်ခံရေး Bag ကေ့ , Trapezoid Dedusting ကေ့အရိုး , Trapezoid Organosilicon ကေ့အရိုး , Organosilicon Dedusting လေ့လာကြရအောင် , filter ကေ့အရိုး , Trapezoidal Squirrel ကေ့အရိုး